Home » Lahatsoratra farany farany » Airlines » Aer Lingus dia manohy ny sidina Dublin avy any amin'ny seranam-piaramanidina Budapest
Airlines • Airport • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao Momba ny Hongria • Vaovao Mafana Irlandey • Vaovao • fanorenana • tompon'andraikitra • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News
Mpandray ny sainam-pirenena Irlandey dia miarahaba ny mpanjifa hiverina amin'ny sidina misy azy eo anelanelan'ny Budapest sy Dublin voalohany hatramin'ny nanombohan'ny areti-mandringana.
Aer Lingus dia mamerina ny rohy mankany Budapest-Dublin.
Aer Lingus dia hiasa serivisy intelo isan-kerinandro amin'ny Alarobia, Zoma ary Alahady.
Ny fiverenan'i Aer Lingus dia hampiroborobo ny tsenan'i Budapest amin'ny seza efa ho 2,500 isam-bolana.
Tamin'ny herinandro lasa izay no nahita Seranam-piaramanidina Budapest vavao ny fiverenan'ny mpiara-miasa efa hatry ny ela Aer Lingus. Nanompo ny vavahady hongroà nanomboka ny taona 2004, mandray ny mpanjifa hiverina an-tsambo ny sidina misy eo anelanelan'ny Budapest sy Dublin hatramin'ny voalohany ny areti-mifindra.
Aer Lingus dia hiasa serivisy intelo isan-kerinandro amin'ny tanàna lehibe indrindra any Irlandy amin'ny Alarobia, Zoma ary Alahady. Amin'ny fampiasana ny fiaramanidina A320 misy azy eo amin'ny sehatra 1,912km, hampiakatra ny tsenan'i Budapest amin'ny seza efa ho 2,500 isam-bolana.
Balázs Bogáts, Lehiben'ny fampandrosoana ny zotram-piaramanidina, seranam-piaramanidina Budapest dia naneho hevitra: Ny fandaharam-pifandraisan'i Aer Lingus nanohy ny rohy mankany amin'ny renivohitra Irlandy dia nahatonga ny faran'ny herinandro lavorary nankany amin'ny toerana malaza noho ny kolontsaina sy ny natiora mandray. ”
Peter O'Neill, COO, Aer Lingus dia nilaza hoe: "Faly izahay manolotra indray sidina avy any Budapest ary miarahaba ireo mpanjifa miverina ao an-tsambo fa nilamina ny fameperana ny dia." Hoy koa i O'Neill: "Faly izahay fa afaka manao izay tsara indrindra azonay atao amin'ny mpanjifa maro kokoa - mamindra ny dia iraisam-pirenena azo antoka. ''